၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက် .
NMN အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ။ NAD+ သည် NMN နှင့်ဘာလုပ်ရမလဲ။ NMN အမှုန့်သည်ဘေးကင်းသောဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဟုတ်ပါသလား။ NMN အမှုန့်သည်ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်သို့မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများပေးနိုင်သနည်း။ အစားအစာမှအိုမင်းရင့်ရော်မှုအထိ NMN လုံလောက်စွာရနိုင်သလား။ NMN Powder ကိုဘယ်လိုယူရမလဲ။ NMN နှင့်အတူအခြားဖြည့်စွက်အားဆေးများငါသောက်သင့်သလား။ NMN သည်ဆန့်ကျင်ဖက်များအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
အဆုတ်ကင်ဆာဆိုတာဘာလဲ အဆုတ်ကင်ဆာအမျိုးအစားများမှာအဘယ်နည်း။ သငျသညျအဆုတ်ကင်ဆာရှိသည့်အခါရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ ငါ့မှာအဆုတ်ကင်ဆာရှိမရှိဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ။ ကျွန်ုပ်၏အဆုတ်ကင်ဆာအဆင့်များမှာအဘယ်နည်း။ ငါဘာကြောင့်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်တာလဲ။ အဆုတ်ကင်ဆာကိုဘယ်လိုကုသမလဲ အဆုတ်ကင်ဆာဆိုတာဘာလဲ ကင်ဆာသည် […]
Sunitinib Malate ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေ Sunitinib Malate ကိုသုံးနိုင်သလဲ။ Sunitinib Malate အလုပ်လုပ်ပုံ? Sunitinib Malate ကိုဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။ Sunitinib Malate သိုလှောင်နည်း Sunitinib Malate ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်မျှသိရှိနိုင်ပါသနည်း။ Sunitinib Malate ကိုအခြားမည်သည့်ဆေးဝါးများကလွှမ်းမိုးမည်နည်း။ FDA မှ Sunitinib Malate ကိုကျောက်ကပ်ဆဲလ်ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင်အလိုလျောက်ကုသမှုအဖြစ်အတည်ပြုသည်။
ရင်သား - ကင်ဆာအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်မျှသိသနည်း FDA Apprvoal မှလက်တွေ့ရလဒ်များ Neratinib ဆိုတာဘာလဲ။ Neratinib ကိုဘယ်သူလိုအပ်ပါသလဲ။ Neratinib သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သည်ကိုမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ Neratinib ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ Neratinib ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုသောက်ရသလဲ။ Neratinib ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာမြင်နိုင်သနည်း နိဂုံးရင်သားကင်ဆာအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်မျှသိသနည်း။ ရင်သား […]
Acalabrutinib Backgroud Acalabrutinib ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Acalabrutinib ကုသမှု (အသုံးပြုသည်) Acalabrutinib လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား Acalabrutinib ၏ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။ Acalabrutinib VS Ibrutinib သုတေသန - Acalabrutinib နာတာရှည် lymphocytic leukemia (CLL) Acalabrutinib Backgroud ကုသမှုယခုအချိန်တွင် acalabrutinib သည် B-all၊ Myelofibrosis၊ Ovarian Cancer၊ Multiple Myeloma နှင့် Hodgkin Lymphoma ကိုကုသရာတွင်စမ်းသပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။